बाहिरियो वास्ताविकता: कमानसिंह र नारायणकाजीको अडियो-भिडियो प्रकरणले लियो नयाँ मोड ! Kaman Singh Lama -
Home News बाहिरियो वास्ताविकता: कमानसिंह र नारायणकाजीको अडियो-भिडियो प्रकरणले लियो नयाँ मोड ! Kaman...
बाहिरियो वास्ताविकता: कमानसिंह र नारायणकाजीको अडियो-भिडियो प्रकरणले लियो नयाँ मोड ! Kaman Singh Lama
स्वदेशीभन्दा बढी आयातित कृषि उपज बजारमा आइपुग्छन्, जसमा प्रयोग भएका विषादीको मात्राबारे सरकारको नीति प्रस्ट हुन नसक्दा अलमल नै थियो । अब भने सरकारले तरकारी, फलफूल र चियामा विषादीको अधिकतम मात्रा तोक्ने भएको छ ।
यसका लागि विषादी अवशेषको अधिकतम सीमा तोक्नेसम्बन्धी खाद्य पदार्थको गुणस्तर निर्धारण आदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको छ ।
योसँगै स्याउ, केरा, करेला, भन्टा, बन्दा, काउली, भिन्डी, आलु, टमाटर र चियामा विषादीको मात्रा तोक्ने बाटो खुलेको छ । फलफूल तथा तरकारीमा पहिलो पटक जीवनाशक विषादी अवशेषको अधिकतम सीमा (म्याक्सिमम रेजिड्यु लिमिट) निर्धारण गरिएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक उपेन्द्र रायले बताए । ‘यसअघि आयातित र स्वदेशी तरकारी तथा फलफूलका लागि विषादी मात्राको मापदण्ड थिएन । धेरै गृहकार्यपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेस भयो । स्वीकृत पनि भयो,’ उनले भने, ‘सबै ल्याब तयारी अवस्थामा छन्, अब कार्यान्वयनमा जान्छौं ।’
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि अब आदेश राजपत्रमा प्रकाशित हुनेछ । त्यसपछि यसले थप आधिकारिकता पाउनेछ । अहिले करिब २८/२९ ग्रुपका विषादी प्रयोग भइरहेको विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनले बताए । ती विषादी तरकारी, फलफूल तथा अन्य बालीमा प्रयोग भइरहेका छन् । स्वदेशी गरी विदेशबाट आयात हुने फलफूल तथा तरकारीमा पनि विषादीको मात्रा भेटिन्छ । त्यसलाई व्यवस्थित गर्न तरकारी तथा फलफूल गरी मुख्य १० वटामा मात्रा तोक्ने निर्णय गरिएको हो । ‘यसअघि फलफूल तथा तरकारीमा विषादीको सीमा तोकिएको थिएन । करिब डेढ वर्षको गृहकार्यपछि यो काम भएको छ,’ महर्जनले भने । निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐनअनुसार भन्सार बिन्दुमा क्वारेन्टाइन प्रक्रिया र जीवनाशक विषादीको अवशेष परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार सीमा तोक्ने तयारी गरिएको थियो ।
ड्राफ्ट प्राविधिक समितिबाट स्वीकृत भएपछि स्तर निर्धारण समितिबाट स्वीकृत गरिन्छ । त्यसपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएपछि वैधानिक हुन्छ ।’ उनका अनुसार ‘एमआरएल’ निर्धारणबारे विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) लाई जानकारी गराइएको थियो । एमआरएल निर्धारणबारे डब्लूटीओ आबद्ध कुनै पनि देशले टिप्पणी नउठाएपछि कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको हो ।
प्रवक्ता महर्जनका अनुसार स्याउमा २७ वटा जीवनाशक विषादीको अवशेषको अधिकतम सीमा तोकिएको छ । केरामा ४२, करेलामा १, भन्टामा २१ र बन्दामा ३५ वटा जीवनाशक विषादीको अवशेषको अधिकतम सीमा तोकिएको छ । काउलीमा १३, भिण्डीमा ४, आलुमा ७१ र चियामा १९ वटा अवशेषको अधिकतम सीमा तोकिएको उनले जानकारी दिए । ‘विषादीको सीमा/स्तर नहुँदा कारबाहीमा जान गाह्रो हुन्थ्यो । कति मात्रा भएपछि कारबाही गर्ने भन्नेमा अन्योल हुन्थ्यो,’ महर्जनले भने, ‘अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा सीमा तोकेका छौं । विषादीको मात्रा बढी देखिए खाद्य ऐनअनुसार कारबाही हुन्छ ।’ यसअनुसार ५० हजार रुपैयाँ वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने जनाइएको छ ।
विशेषगरी तरकारी र फलफूल भारत अनि चीनबाट आयात हुन्छ । तर परीक्षणका लागि पर्याप्त प्रयोगशाला नहुँदा प्रभावकारी रूपमा परीक्षण हुन सकेको छैन । यता महानिर्देशक रायले भने नाकामा १२ वटा ल्याब तयारी अवस्थामा रहेको दाबी गरे । केन्द्रको ल्याब २४ घण्टा चलाउने गृहकार्य पनि भइरहेको उनले जानकारी दिए । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका अनुसार विषादी विश्लेषण प्रयोगशाला स्थापनाका लागि उपकरण खरिद प्रक्रिया जारी छ ।
तरकारी तथा फलफूलबाहेक आल्मोन्ड्स, बदाम, हेजलट्स, ब्राजिलनट्स, पिस्ता, दूध र स्याउको जुसको माइकोटक्सिनको अधिकतम सीमा पनि थप गरिएको छ । यसअघि ‘ढुसीको मात्रा’ को मापदण्ड नभएको महानिर्देशक रायले बताए । अहिले त्यसको पनि मापदण्ड बनेको छ । ‘नेपालको हकमा यो एकदमै नौलो हो, अब मापदण्डअनुसार नभए कारबाही हुन्छ,’ उनले भने ।
यसअघि विभागले चिउरा, पुष्टकारी, गुदपाक, तेल तथा घिउमा टोटल पोलार मटेरियल र दालमोठको गुणस्तर निर्धारण गरेको थियो । मन्त्रालयले २०७७ भदौ २९ मा राजपत्रमा यससम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरिसकेको छ । यी वस्तुमा अनुगमन भए पनि ढुसी, रङ मात्रै निरीक्षण गरिन्थ्यो । अब स्पेसिफिक रूपमै अनुगमन हुने विभागको दाबी छ ।
Previous article२ बर्षपछि अनिता बोल्नसक्ने भएपछि चर्चित मोडल अञ्जली अधिकारीकै अगाडी गाइन् गलबन्दी गीत
Next articleसय रुपैयाँमा स्कुल पढेकी अस्मितालाई विश्वकै महंगो कलेजमा निशुल्क पढ्न पाउने अवसर (सम्मान स्वरुप सेयर गराै)